Kobe ya | MyLann – Online Restaurants Directory and Food Reviews in Myanmar
Price Range - 60000 Ks - 80000 Ks
Phone - 01 535072
- Aka Mori
- Kobeya Salad
No. 615(B), Marlar Street (Pyay Road), Kamayut
No.615(B), မာလာလမ်း (ပြည်လမ်း)
Activities on Kobe ya
gineal like Kobe ya4years ago
60000 Ks - 80000 Ks
mmfoodie like Kobe ya4years ago
Kyaw Naing is eating at Kobe ya4years ago
Kyaw Naing reviewed Kobe ya4years ago
One of my favorite Japanese restaurants in Yangon. I love their lunch sets, good quality meet and reasonable price. Customer service is nice and very private place
Kyaw Naing like Kobe ya4years ago
Si Thu Htut is eating at Kobe ya4years ago
Nyan Lwin Myo reviewed Kobe ya4years ago
Kobe ya မှ ဂျပန် Kobe အမဲသားတွေက တကယ်ကို ထိပ်တန်းပါပဲ။ အမဲသားပါးပါးလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကင်လို့ရပြီး စားလိုက်တာနဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ပျော်ဝင်သွားလောက်တဲ့အထိ ကောင်းပါတယ်။ Lunch Menu ကတော့ ဈေးသိပ်မကြီးပါဘူး။ Dinner ကတော့ နည်းနည်းဈေးများတယ်။ ဒါပေမဲ့ Kobe ya ရဲ့ အရသာ၊ ဆိုင်အပြင်အဆင်၊ ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ထည့်စဉ်းစားကြည့်ရင် အရမ်းတန်ပါတယ်။ :)
Writeareview for Kobe ya
Report for Kobe ya
Reserve table at Kobe ya